यी कलिला ४ बालबालिकाहरुले गरे यस्तो धन्दा, प्रहरी पनि परे तिन छक्क ! - dautarimedia.com
यी कलिला ४ बालबालिकाहरुले गरे यस्तो धन्दा, प्रहरी पनि परे तिन छक्क !
बिर्तामोड– ला’गूऔ’षध ब्रा’उनसु’गर सहित झापाको बिर्तामोडबाट सोमवार दिउँसो दुई जना युवा समातिएका छन् । पक्राउ पर्नेमा हल्दिबारी गाउँपालिका–१ का २० वर्षीय सुवास न्यौपाने र बिर्तामोड नगरपालिका–१० का २४ वर्षीय समिर राई छन् ।
शंका लागेर चेकजाँच गर्दा उनीहरुका साथमा १२ ग्राम ब्रा’उनसु’गर भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ । झापा प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी राकेश थापाले काँकडभिट्टा र अनारमनीबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले मे.८ प ७३९२ नम्वरको मोटरसाइकलमा सवार उनीहरुका साथबाट उक्त ला’गूऔ’ष’ध ब’रा’मद गरेको बताए ।
त्यस्तै , बालबालिकालाई रु पाँच हजार सहयोग गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक रु पाँच हजार नगद सहयोग प्रदान गर्नै भएको छ । सरकारले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई एक वर्षका लागि प्रतिव्यक्ति रु ६० हजार सहयोग प्रदान गर्न लागेको हो । गण्डकीमा स्थायी बसोबास गर्ने र कोरोनाबाट मृत्यु भएका नागरिकका सन्ततिले रकम प्राप्त गर्नेछन् ।
यसका लागि हाल रु ३० लाख बजेट अख्तियारी प्राप्त भएको र प्राप्त विवरणका आधारमा आवश्यक बजेट व्यवस्था हुने महाशाखा प्रमुख लम्सालले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले राहत रकम वितरणका सम्बन्धमा कार्यविधि बनाउन लागेको छ । वर्षमा एकैपटक वितरण नगरिकन चरणवद्धरूपमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई रकम प्रदान गरिने जनाएको छ । –––
Previous: जताततै चर्चामा प्रकाश सपुतको तीज गीत ‘कुरा बुझ्न पर्च’,२ हप्ता नपुग्दै करोडको नजिक -भिडियो
Next: छोरी जन्मिएपछि पागल भएकि आमा ,बिरामि बोली समेत छैन ,कठै (हेर्नुस् भिडियो )